Tag: twitter localization | Martech Zone
Kpido: twitter localization
Reach7: Tinye ndị na-ege ntị n'ọtụtụ asụsụ na Social Media
Tọzdee, Febụwarị 25, 2016 Friday, February 26, 2016 Douglas Karr
Reach7 chọrọ ime ka ọ dịrị ndị mmadụ na azụmaahịa mfe ịmụba mmekọrịta ha na mba ụwa. Na Reach7, ndị ọrụ na-amata ma soro ndị na-ege ntị kachasị mkpa na mgbasa ozi mmekọrịta na-adị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Usoro ha na-enyere ndị ọrụ aka iwulite ndị na-ege ntị dị mkpa na ahịa mpaghara ha ma ọ bụ rụọ ọrụ nke ọma itinye aka na ahịa ụwa. Ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịkọwapụta tweets n'ihe karịrị asụsụ iri asatọ nke ụwa a na-asụ. Emechara 80% nke ntụgharị asụsụ